သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Machinarium Game...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Machinarium Game လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီ Game လေးဟာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်...!လွယ်မလိုလိုနဲ့ အရမ်းခတ်ပါတယ် ဝှက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို တွေ့အောင်ရှာပြီး ဆတ်ပေးရတဲ့ Game လေးပါ..!ကျွန်တော်ကတော့ မနည်းဆော့နေရတယ်...!ဦးနှောက်လည်း အရမ်းစားတဲ့ Game လေးပါ...! တစ်ခါတစ်လေ ဒီလို Game လေးတွေဆော့ရတာ စိတ်တွေ ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူး...!သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကို တစ်ခါတစ်လေ GAME ဆော့ရင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ပါ...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကနည်းနည်းကြီးနေလို့ PART 1.2.3.ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ်...!စိတ်ဝင်စားရင် 3ဖိုင်လုံးကို ဒေါင်းပြီး Folder တစ်ခုထဲမှာ ထည့်ပေးပါ...! Install လုပ်ပေးစရာ မလိုပါ...!
DEMO လင့်လေးချိတ်ပေးထားပါတယ် ဝင်ရောက်ဆော့နိုင်ပါတယ် "ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ..."
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးပေးထားပါတယ်...!
မှတ်ချက်။ ။3 ဖိုင်လုံးအား ဒေါင်းပြီး FOLDER တစ်ခုထဲထည့်မှ GAME ဆော့လို့ရပါမည်...!
" PART 1..." (137.5 MB )
" PART 2..." ( 99.79 MB )
" PART 3..." ( 105.45 MB )
No Response to "သူငယ်ချင်းတို့အတွက် Machinarium Game...!"